December 2017 – AutoMyanmar
Ford Motor Company အနေနဲ့ ဒီဇင်ဘာလမှာရရှိခဲ့တဲ့ ရောင်းချနိုင်မှုရလဒ်ကိုတော့ ၂၀၁၈ ဇန်နဝါရီလမှာ ထုတ်ပြန်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်အနေနဲ့ကတော့ နံနက် ၉ နာရီ ၁၅ မိနစ် EST(Eastern Time) ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၀ နာရီ EST မှာတော့ Ford ရဲ့ Sales Analyst ဖြစ်တဲ့ Erich Merkle ဆိုသူက Conference Call ကိုကြီးမှူးပြီးစတင်ကျင်းပမှာပါ။ Conference Call မှာ News Media တွေပါတက်ရောက်မှာဖြစ်ပြီး Company ရဲ့ ဒီဇင်ဘာလ ရောင်းချနိုင်မှုရလဒ်သာမက မာကတ်မှာ Trend ဖြစ်နေတဲ့ ဟာတွေကိုလည်းဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Conference Call Access Information Toll Free: 1-877-870-8664 International: […]
၂၀၁၇ ထဲမှာ Bentley ရရှိခဲ့တဲ့ဆုတချို့ကို ပထမဉီးဆုံးဖော်ပြပေးသွားပါ့မယ်။ The New Continental GT နဲ့ Global ကဆု ၄ ဆုကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Bentayga နဲ့ဆိုရင် ၂၀၁၇ အတွင်းမှာ “SUV of the Year” ဆု အပါအဝင် ဆုပေါင်း ၇ ဆုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ Flagship Mulsanne အနေနဲ့လည်း “Single best way to travel inacar” ဆိုပြီးသတ်မှတ်ခြင်းလည်းခံခဲ့ရပါသေးတယ်။ British ဇိမ်ခံပစ္စည်း brand တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Bentley ဟာဆိုရင် ၂၀၁၇ အတွင်းမှာပဲ ဆု ပေါင်း ၂၀ ကျော်ကိုဆွတ်ခူးခဲ့တာပါ။ ပထမဉီးဆုံး ဆု ရရှိခဲ့တာကတော့ […]
Date: December 28, 2017 0
၂၀၁၈ မှာကျင်းပမယ့် INTERNATIONAL GENEVA MOTOR SHOW!
International Geneva Motor Show ကို ၂၀၁၈ မတ်လထဲမှာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရက်ကတော့ မတ်လ ၈ ရက်နေ့(ကြာသပသေး) ကနေ ၁၈ ရက်နေ့(တနင်္ဂနွေ) အထိပါ။ ကျင်းပမယ့်နေရာကတော့ Swiss မှာရှိတဲ့ Geneva မှာဖြစ်ပါတယ်။ International Geneva Motor Show က ၁၉၀၅ ခုနှစ်ထဲက မတ်လတိုင်းကျင်းပလာတဲ့ Car Event တစ်ခုဖြစ်အခု ကျင်းပမယ့် ပွဲက ၈၈ ကြိမ်မြောက်ပါ။ ၁၉၆၁ ခုနှစ်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ ပွဲမှာဆိုရင် Jaguar Company က Legendary E-Type model ကို ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီခဲ့ဖူးပါတယ်။ အခု ကျင်းပမယ့်ပွဲ မှာတော့ ကားအလန်းစားတွေဖြစ်တဲ့ Lamborghini Centenario နဲ့ McLaren P1 […]
Lamborghini, McLaren P1, Motor Show and Event
၂၀၁၈ ဖေဖော်ဝါရီလမှာကျင်းပသွားမယ့် Motor Show တစ်ခုဖြစ်တဲ့ RETROMOBILE!
မနေ့တုန်းက ၂၀၁၈ ရဲ့ပွဲဉီးထွက် Motor Show တစ်ခုဖြစ်တဲ့ DETROIT MOTOR SHOW အကြောင်းကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ Event မှာပြသမယ့်ကားအချို့အကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ မသိလိုက်ရတဲ့ လူတွေအနေနဲ့ကတော့ အောက်ပါ Link ကနေသွားရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါတယ်။ ၂၀၁၈ အစောပိုင်းလောက်မှာကျင်းပမယ့် Motor Show တစ်ခုဖြစ်တဲ့ DETROIT MOTOR SHOW! အခု RETROMOBILE က ၂၀၁၈ Motor Show တွေထဲကဒုတိယမြှောက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ဖေဖော်ဝါရီ ၇ရက်နေ့ကနေ ၁၁ ရက်နေ့အထိကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျင်းပမယ့်နေရာကတော့ Paris မှာရှိတဲ့ Porte de Versailles Exhibition Centre မှာပါ။ ၂၀၁၇ ဖေဖော်ဝါရီလ မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ RETROMOBILE မှာဆိုရင် ထူးခြားလှတဲ့ ကားပေါင်းအစီး ၅၀၀ နဲ့မိတ်ဆက်ခဲ့တာပါ။ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ကျင်းပခဲ့တယ်လို့ပဲဆိုရမှာပါ။ “ဖေဖော်ဝါရီ ၇ […]
Motor Show and Event
Date: December 27, 2017 0
၂၀၁၈ အစောပိုင်းလောက်မှာကျင်းပမယ့် Motor Show တစ်ခုဖြစ်တဲ့ DETROIT MOTOR SHOW!
Detroit Motor Show ဟာဆိုရင် ၂၀၁၈ မှာကျင်းပမယ့် Motor Show တွေထဲက တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ Detroit Motor Show ဟာ North American International Auto Show (NAIAS) ဆိုပြီးတော့လည်း အမည်နောက်တစ်မျိုးတွင်ပါသေးတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်လောက်တုန်းက Avalon Brand New Model ကားကို ၂၀၁၈ မှာကျင်းပမယ့် NAIAS မှာကျင်းပမယ်လို့ ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ Website ကိုလာလည်ဖူးတဲ့လူဆို သိနေမှာဖြစ်ပေမယ့် အခုမှလာလည်တဲ့ မိတ်ဆွေအသစ်ဆိုရင်တော့ အောက်ပါ လင့် ကနေသွားရောက်ကြည့်ရှု့နိုင်ပါတယ်။ Avalon NAIAS ကိုကျင်းပမယ့်နေရာကတော့ Detroit မှာရှိတဲ့ Cobo center မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ Detroit ဆိုတာကတော့ Michigan State မှာရှိတဲ့ […]
Date: December 26, 2017 0
Brazil နိုင်ငံက ကားတွေကို Argentina သို့တင်ပို့နေပြီဖြစ်တဲ့ Nissan!
Brazil ရဲ့ Rio de Janeiro မှာရှိတဲ့ Nissan စက်ရုံကြီးဟာလွန်ခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက်နေ့က Made in Brazil ကားတွေကို Argentina သို့ပို့ဆောင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးပြီဖြစ်တာကြောင့် မကြာခင်အချိန်အတွင်းမှာပဲ Argentina လမ်းမကြီးတွေပေါ်မှာ Made in Brazil ကားတွေကိုတွေ့ရတော့မှာပါ။ Rio de Janeiro မှာရှိတဲ့စက်ရုံအနေနဲ့ Global Crossover ကားပေါင်း ၉၃၃ ကားကို ပထမဉီးဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ဖြန့်ချီဖူးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အခုတော့ Brazil ရဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကို ဆက်လက်ဖြန့်ချီဖို့ ဉီးတည်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကို ဖြန့်ချီရာမှာ Nissan ရဲ့ပထမဉီးဆုံး Milestone ကတော့ Latin America ကိုတင်ပို့ဖြန့်ချီနိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုတော့ Latin America မှာရှိတဲ့ နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ […]
၂၀၁၇ အတွင်းမှာ Electrified Vehicle ပေါင်း တစ်သိန်းကျော်ကိုရောင်းချနိုင်ခဲ့တဲ့ BMW group!
BMW group အနေနဲ့ electrified vehicle ပေါင်း တစ်သိန်းကျော်ကို ၂၀၁၇ အတွင်းမှာရောင်းချနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ BMW အနေနဲ့ နှစ်အစောပိုင်းလောက်ကတည်းက electrified vehicle ပေါင်း တစ်သိန်းကို ဒီနှစ် ၂၀၁၇ အတွင်းမှာရောင်းချမှာဖြစ်တယ်လို့ အစီအစဉ်ချပြီး ကြေညာခဲ့တာပါ။ အခုတော့ သူတို့ရဲ့ အစီအစဉ်အတိုင်း Sale Target ကတကယ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ အစီအစဉ်အတိုင်း Sale Target ကတကယ်ဖြစ်လာတာကြောင့် BMW Tower ကြီးမှာလှပ လှတဲ့ LED မီးတွေတပ်ဆင်ထားတာကိုလည်း တွေ့ရမှာပါ။ BMW ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအပိုင်းမှာအကြီးအကဲတစ်ဉီးဖြစ်တဲ့ Harald Kruger ဆိုသူကအောက်မှာဖော်ပြတဲ့အတိုင်းပြောကြားခဲ့တာပါသေးတယ်။ “At the beginning of the year, we announced we would like […]
ရုရှားနိုင်ငံမှာ Pajero Sport ထုတ်လုပ်မှုကိုပြန်လည်စတင်ပြီဖြစ်တဲ့ Mitsubishi Motors Corporation!
Mitsubishi Motors Corporation (MMC) ကတော့ Pajero Sport midsize SUV(Sport Utility Vehicle) ထုတ်လုပ်မှုကို ရုရှားနိုင်ငံက Kaluga မှာရှိတဲ့ Peugeot-Citroen-Mitsubishi (PCMA RUS) စက်ရုံမှာပြန်လည်စတင် နေပြီဖြစ်ပြီး အခမ်းအနားကိုတော့ ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့မှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Kaluga စက်ရုံကိုတော့ ၂၀၀၉ ခုနစ်မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး စက်ရုံကနေ ယာဉ်ပေါင်း ၁၂၅၀၀၀ ကိုထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီပြီးနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ MMC က Pajero Sport ကို ၂၀၁၃ ဇူလိုင်က PCMA RUS မှာစတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီရာမှာ PSA Peugeot Citroen ကလည်း Partnership အဖြစ်ပါဝင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရုရှားနိုင်ငံရဲ့စီပွားရေးအရ Automobile market ကြီးငြိမ်သက်လာတာကြောင့် ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီမှုကိုရပ်နားခဲ့ရပါတယ်။ […]
Honda Legend ကို ဒီဇိုင်းပိုင်းပြန်လည်ပြင်ဆင်ပြီး Website မှာထုတ်ဖော်ပြသခဲ့တဲ့ Honda Motor Corporation!
ဒီဇိုင်းပိုင်း ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ Honda Legend ကိုလာမယ့် ၂၀၁၈ ဖေဖော်ဝါရီလ မှစတင်မိတ်ဆက်မှာဖြစ်ပေမယ့် website ပေါ်မှာပုံအချို့ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Honda Legend ကအခုလက်ရှိမှာတော့ Sport Hybrid SH-AWD (Super Handing All-Wheel Drive) ပါဝင်တဲ့ Fifth-generation အထိထွက်ရှိထားပါတယ်။ ကားအင်ဂျင်နဲ့ မော်တာတွေကိုဖြတ်ပြီး ကားဘီးလေးလုံး လုံးမှာအလုပ်လုပ်တဲ့ Hybrid System လည်းပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Honda Legend ကိုတော့ ၂၀၁၄ နိုဝင်ဘာလမှာ စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဖြန့်ချီခဲ့တာကတော့ ၂၀၁၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်နေ့ပါ။ အခု Honda Legend ကို ဒီဇိုင်းပိုင်းပြန်ပြင်ရာမှာ အဓိက ပြောင်းလဲသွားတာတွေကတော့ကားကိုယ်ထည်နဲ့ Chassis နံပါတ် တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကားရဲ့လက်ကိုင်ကို ထိန်းချုပ်ရတာပိုမိုလွယ်ကူအောင် Handling […]
Date: December 21, 2017 1
၂၀၂၀ မှာလျှပ်စစ်ကား ၁၀ စီးကိုထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီဖို့ အစီအစဉ်ဆွဲနေတဲ့ Toyota!
Toyota Motor Corporation က လျှပ်စစ်ကား ၁၀ စီး (သို့) ၁၀ စီးထက်ပိုတဲ့ အရေအတွက် ၂၀၂၀ အစောပိုင်းလောက်မှာဖြန့်ချီမယ်လို့ အစီအစဉ်အစီဆွဲထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုလက်ရှိ Toyota မှာတော့ လျှပ်စစ်ကားတွေရှိနေတယ်ဗျ။ Hybrid model ဘက်ကိုရောက်ပေမယ့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသီးသန့်ကြီးပဲအသုံးပြုရတဲ့ကားတော့မဟုတ်ပါဘူး။ Toyota ရဲ့ လျှပ်စစ်ကားတွေကို တရုတ်မှာ စတင်ရောင်းချမှာဖြစ်တယ်လို့ ပြီးခဲ့ တနင်္လာနေ့က Shigeki Terashi ဆိုတဲ့လူပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်မှာရောင်းချပြီးရင်တော့ Japan, India, U.S, Europe အစရှိတဲ့နေရာတွေမှာ ဆက်လက်ရောင်းချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ ထပ်မံပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ်။ Shigeki Terashi ဆိုသူကတော့ Toyota Motor Corporation ရဲ့ Executive Vice President ဖြစ်ပါတယ်။ Toyota company အနေနဲ့ ၂၀၂၅ […]